Wyndham Hotels & Resorts hiditra ao Nepal sy Bhutan, hitatra any India
Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Wyndham Hotels & Resorts hiditra ao Nepal sy Bhutan, hitatra any India
Ramada nataon'i Wyndham Valley Thimpu (Bhutan)
Wyndham Hotels & Resorts androany dia namoaka ny drafitra hanokafana ireo hotely voalohany any Nepal sy Bhutan, ary koa nanambara ny fisokafan'ny Hawthorn Suites nataon'i Wyndham Dwarka - hotely Hawthorn Suites by Wyndham voalohany tany India.
Ny trano fandraisam-bahiny telo dia ampahany amin'ny ezak'i Wyndham lehibe kokoa hanitarana ny dian-tongony manerana ny zanatany indianina ary ampiana fananana fanampiny ao amin'ny faritra izay nosokafana vao haingana na natao hisokatra mandritra ny sivy volana manaraka. Wyndham dia iray amin'ireo orinasa hotely iraisam-pirenena lehibe indrindra any India.
Nikhil Sharma, talen'ny faritra, Eurasia, Wyndham Hotels & Resorts dia nilaza hoe: "Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Bhutan sy Nepal dia nahita fitomboan'ny fizahan-tany tsy tapaka, ka nahatonga azy ireo ho tanjona tsara hivelaranay. Ankoatr'izay, izy ireo dia mameno tsara ny fotoana mety sy ny tampon'ny tsena midscale any India, izay nohamafisinay androany tamin'ny fanolorana ny marika Hawthorn Suites nataon'i Wyndham. Raha mbola manohy manao onja amin'ny indostrian'ny fandraisam-bahiny ny zanaky ny indianina, Wyndham dia mijanona ho laser mifantoka amin'ny fidirana amin'ny tsena lehibe aminy ary manatanteraka ny iraka nampanaovina ny fivezivezena amin'ny hotely ho an'ny rehetra. ”
Ny fisokafan'ny hotely ho avy dia misy:
Manamarika ny fahatongavan'i Wyndham ho any Bhutan, ny Ramada® avy amin'i Wyndham Valley Thimpu dia hanolotra efitrano malalaka 41, ao anatin'izany ny maro manana fahitana malalaky ny Himalaya mahatalanjona. Ao anaty lohasaha Thimpu eo amoron'ny renirano Raidāk mikoriana maimaimpoana, ny toerana misy azy dia hanome fidirana mora foana amin'ny hetsika manokana ao amin'ny Tasichho Dzong, ilay sarivongana goavan'ny Buddha Dordenma, ary ilay toerana masina Chorten Fahatsiarovana. Ny trano fandraisam-bahiny dia antenaina hisokatra amin'ny martsa 2021.
Ramada Encore avy amin'i Wyndham Kathmandu Thamel (Nepal)
Ny fidiran'i Wyndham voalohany tao amin'ny fanjakan'ny Himalaya any Nepal, ny Ramada Encore nataon'i Wyndham Kathmandu Thamel dia miorina ao amin'ny distrikan'i Thamel ao an-drenivohitra Kathmandu, izay ivon'ny indostrian'ny fizahan-tany nandritra ny efa-polo taona mahery. Ny trano fandraisam-bahiny dia hanolotra efitrano fandraisam-bahiny miisa 90 feno fanamamiana miaraka amina karazana fampitaovana hatao hipetrahana tsara sy tampon-trano miaraka amin'ny fahitana ny tanàna. Heverina hisokatra amin'ny Aogositra 2020 ny trano fandraisam-bahiny.
Ramada avy amin'i Wyndham Mussoorie Mall Road (India)
Miparitaka eraky ny velaran-tany iray hektara, ny Ramada avy amin'i Wyndham Mussoorie Mall Road dia hanolotra efitrano 45 rehetra izay ilaina amin'ny filan'ny vahiny ny fotoanany. Ny trano fandraisam-bahiny dia ho hita eo amin'ny iray amin'ireo toerana itodiana toerana be mpankafy indrindra ao avaratr'i India, antsoina koa hoe Queen of the Hills, malaza eo amin'ireo fialam-boly ary koa mpandeha raharaham-barotra. Ny trano fandraisam-bahiny dia antenaina hisokatra amin'ny volana amin'ity volana ity.
Ny fisokafan'ny taona 2020 dia misy:
Hawthorn Suites avy amin'i Wyndham Dwarka (India)
Manamarika ny fahatongavan'ny marika Hawthorn Suites by Wyndham ao amin'ny zanatany indianina, ny Hawthorn Suites by Wyndham Dwarka dia toeram-pialamboly ara-tontolo iainana izay misy efitrano fandraisam-bahiny malalaka 202 ary eo akaikin'ny Tempolin'i Dwarkadhish, Dwarka Beach ary Gomti Ghat. Ny fananana, izay nosokafana tamin'ny volana aprily 2020, dia manolotra fidirana ivelany mivelatra miaraka amina fotoana hifantohana amin'ny fahasalamana sy ny fizahana ny natiora.
Ramada avy amin'i Wyndham Aligarh GT Road (India)
Trano fandraisam-bahiny fananganana vaovao miorina ao Aligarh, any amin'ny faritra andrefan'ny fanjakana Uttar Pradesh, ny Ramada avy amin'i Wyndham Aligarh GT Road dia nosokafana tamin'ny volana Janoary 2020 ary misy efitrano fandraisam-bahiny miisa 60 ankehitriny, toerana malalaka eny an-kianja, ary maro karazana kojakoja ilaina. Miorina amin'ny toerana mety miaraka amin'ny fidirana mora mankany amin'ny Aligarh Junction Railway Station sy Aligarh Bus Stand, ny hotely dia manana toeram-ponenana tsara ho an'ny dia manerana ny faritra.
Ramada Plaza avy amin'i Wyndham Pune Hinejwadi (India)
Miorina amin'ny làlambe Pune Bangalore, adiny iray monja miala amin'ireo fitsangantsanganana malaza amin'ny faran'ny herinandro toa an'i Lonavala, Khandala, ary Lavasa, no Ramada Plaza avy amin'i Wyndham Pune Hinejwadi. Ny trano fandraisam-bahiny, izay nisokatra tamin'ny volana martsa 2020, dia manana efitrano fandraisam-bahiny 172 malalaka ary manolotra fotoana hijerena ireo toerana manintona eo akaiky eo sy ireo zava-niainana an-kalamanjana toy ny lapa Aga Khan
Ny filoha Breziliana Bolsonaro dia nizaha toetra miabo amin'ny COVID-19
Etihad Airways dia manohy sidina bebe kokoa satria nihena ny fameperana ny dia ao UAE